Uthola izinsongo obhale ekaMeyiwa - Ilanga News
Home Izindaba Uthola izinsongo obhale ekaMeyiwa
Uthola izinsongo obhale ekaMeyiwa
Usenabaqaphi abamgada ubusuku nemini
UHLAFUNA ejeqeza kuhle kwenyamazane umbhali wencwadi ekhuluma ngoSenzo Meyiwa, uMnu Soweto Mandlanzi, ngemuva kokusongelwa kuthiwa makayeke ukugqugquzela indaba yokubhala incwadi ekhuluma ngalo nozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana owadutshulwa wabulawa ekubo kwesinqandamathe sakhe, uKelly Khumalo, eVosloorus.
USenzo wabulawa mhla ka-26 kuMfumfu (October) 2014 kodwa lutho ukuboshwa abantu abamkhipha umphefumulo. Sekuze kwashona noyise, uMnu Sam Meyiwa, owadlula emhlabeni esehamba ngesihlalo esinamasondo emuva kokushaywa wuhlangothi.
UMnu Mandlanzi sekuze kwaphoqeleka ukuba athole abaqaphi abamgada ubusuku nemini.
Lezi ndaba uzitshele ILANGA ngoMgqibelo, ePlayhouse, lapho bekunomcimbi wokwethulwa ngokusemthethweni kwale ncwadi kaSenzo enamakhasi awu-355, ethi “Inexplicable Life of Senzo Meyiwa”.
Ngesikhathi izikhulumi zishiyelana inkundla emcimbini wokwethulwa kwale ncwadi, umfowabo kaSenzo, uSifiso, ukuvezile ukuthi uMnu Mandlanzi uhlangabezane nezingqinamba ebhala le ncwadi, kodwa wangazisho ukuthi iziphi.
ILANGA likhuluma noMnu Mandlanzi ngemuva kokuzwa ngezindaba zokungaphephi kwakhe, uvumile ukuthi impilo yakhe isengcupheni, yingakho esenabaqaphi.
Uveze nokuthi akukho mali abakhokhela yona, kodwa kusuke omunye wamlekelela ngoba ebona impilo yakhe isengcupheni.
“Kalikho icala engilivulile ngoba umthetho kawukwazi ukwenza lutho ngabantu abasabisa abanye, uyabakhuza nje kuphela, kuphelele lapho. Ngiyalibona iqhinga labo, bazama ukudukisa umphakathi ukuze ungakunaki ukuphuma kwencwadi, kodwa ubheke isimo esithi
umbhali wencwadi akaphephile.
“Inkinga yabo besaba ukuthi kukhona engikubhalile ngokufa kukaSenzo kanti akunjalo, incwadi ikhuluma ngempilo kaSenzo ezalwa kuze kube kudlula iwele lakhe naye emhlabeni. Into ebalulekile kule ncwadi wukuthi simazi kangcono uSenzo.
“Ubengubaba onothando, ekhonze kakhulu ezemidlalo. Indaba yokufa kwakhe sakhuluma nabantu ababesendlini, kodwa akukho esakuthola ngaphandle kwalokhu okutshelwa umphakathi.
“Le nto ngiyibona njengetulo lokuvimba into equkethwe yincwadi,” kuphetha yena.
Kule ncwadi uMnu Mandlanzi wakhuluma nomndeni wakwa-Meyiwa, uMandisa Mkhize, owa-yeyingoduso kaSenzo, noPhoswa obeyisikhulu seCosmos okuyiqembu elavundulula lo mdlali. Konke lokhu kwakwenzeka ngosizo lomndeni wakwaMeyiwa.
Previous articleUzohlonishwa ngendondo emqoka uJoseph Shabalala
Next articleInhlalisuthi ishaye intombi emhlophe